musha Kanadha vatambi Keanu Reeves Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Keanu Reeves Biography inokupa Chokwadi pamusoro peNhau yake Yehucheche, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Nhengo dzeMhuri, Hupenyu Hupenyu, Net Kukosha, Mararamiro, uye Hupenyu Hwega.
Zvichitaurwa zviri nyore, tine pano, kuongororwa kwakazara kweCanada Actor's Bio, kubva paMazuva Ekutanga kusvika paakazove Akakurumbira. Tarisa, shanduko dzakakura kubva paUdiki hwake kuva Munhu Mukuru- Chidimbu chakakwana che Hupenyu Hwake Nyaya.
Iyo Hupenyu Nyaya yaKeanu Reeves- Tarisa Hupenyu hwake uye Kumuka.
Chokwadi chinotaurirwa, vanhu vazhinji vane mukurumbira vane chiitiko chinosuruvarisa uye chinorwadza kumashure kwenyaya dzebudiriro yavo. Zvingave zvakaomesesa kubva pahudiki hwavo kana chiitiko chinosuruvarisa mumazuva avo ekutanga, hatife takaziva kusvikira tadzidza nezve Hupenyu Hwavo Hupenyu.
Tichitarisa kubva mundima iri pamusoro, zviri pachena kuti havasi vese vateveri vanonyatsonzwisisa iyo Biography yaKeanu Reeves- saka tasarudza kuve nayo pano.
Verenga pamusoro apo isu tichifumura chokwadi chinonakidza senge mabatiro aakaita nekurambana kwamai vake kwakawanda uye baba vake vekubereka vakasungwa iye achishanda kukwira manera eMukurumbira.
Keanu Reeves Wehucheche Nyaya:
Yakajairika Yevadiki Mufananidzo waKeanu Charles Reeves.
Canada munyori, mutambi, uye munyori wenyaya, Keanu Charles Reeves akazvarwa pazuva re2nd yaGunyana 1964 kuna amai vake, Patricia Taylor, uye baba, Samuel Nowlin Reeves Jr muGuta reBeirut, Lebanon.
Ndiye dangwe pavana vaviri vakazvarwa mumubatanidzwa pakati pevabereki vake. Zvakare kucherechedza, mutambi ane tarenda ane vaviri-hanzvadzi-hanzvadzi kubva kuhukama hwevabereki vake hunotevera.
Makore Ekukura-Kupupurira Amai vake naBaba Kuparadzaniswa semwana:
Nehurombo, vabereki vaKeanu Reeves vakapfuura nekurambana vachienderera vachiri mudiki. Chokwadi ndechekuti, vese Baba naAmai vake vakazoparadzaniswa mu1966.
Panguva iyoyo, vechidiki Reeves vakatadza kunyatsonzwisisa zvaiitika. Chaakakwanisa kuita kupukuta misodzi yairamba ichingoyerera ichidzika kumeso kwamai vake.
Pasina kutambisa nguva, amai vaReeves, avo vaive vachangozvara munin'ina wake, vakatamisa mhuri yake kuenda kuSydney, Australia. Mukomana Murombo nekusaziva aishuvira kuona baba vake.
Haana kuziva kuti baba vake vaive vasiya mhuri zvachose. Munguva yakafanira, mhuri yaKeanu Reeves yakasiya Australia uye pakupedzisira vakagara muNew York City.
Keanu Reeves Mhuri Kubva:
Kutanga uye pamberi pezvese, iyo yeCanadian Celebrity yemadzinza edzinza ndeyechirungu. Kune rimwe divi, dzinza rababa vake rakasiyana- Native maHawaii, Chinese, Chirungu, Portuguese, uye Scottish dzinza.
Tichitarisa nekwavo kwakabva baba vaKeanu Reeves, pane mukana wekuti yavo Mhuri Midzi inodzika zvikuru kubva kuHawaii.
Ethnicity yababa vaKeanu Reeves yakabatana neHonolulu, Hawaii.
Mushure mekuroora kwechipiri kwaamai vaReeves, mhuri yake yakatama ndokugara muToronto, Canada. Nekudaro, veimba yake vakawana ugari hweCanada vachigara muguta.
Keanu Reeves Mhuri Yemashure:
Pakazvarwa, wekuCanada akapedza mazuva ake ekutanga achigara mumhuri yepakati-yemhuri yemhuri. Shure kwaizvozvo, akawana mukana wekunakidzwa nehupenyu hwoumbozha zvichitevera kuroora kwaamai vake kwechipiri kuna Paul Aaron mu1970.
Zvinosuruvarisa, Reeves haana kuwana nguva yakakwana yekujaira kumhuri yake nyowani, sezvo amai vake nababa-baba vake vakarambana pasina kana gore mushure mekuroora kwavo.
Keanu Reeves Hupenyu hwepakutanga:
Kupesana nekufunga kwako, Reeves haana kucheka hukama nababa vake vekutanga-baba, Paul Aaron. Pane kudaro, akatora mukana wekusangana naAaron kuti awane mukana muindasitiri yemamuvhi. Pa9, wechidiki Lad akatora chikamu mukugadzirwa kwemitambo Damn Yankees.
Ndichiri kucherechedza maitiro ekugadzira mafirimu, akatanga kufarira kuita kugadzirwa kwemafirimu. Makore mashoma ekushanda nesimba uye kutsungirira akaona wechidiki weCanada achipinda mukushanda semubatsiri wekugadzira naAaron.
Asati ashuvira kupinda munyika yevaraidzo, Reeves akange achishuvira kuve nyanzvi ice hockey mutambi.
Keanu Reeves Dzidzo:
Sezvakatarisirwa, kukura munzvimbo dzakasiyana kwakakanganisa hupenyu hwevechidiki Reeves. Pakutanga, iye aive mhando akazove asina hanya zvakanyanya nemitemo yechikoro nemirau.
Reeves akava asingateereri uye akazviwanira iye akadzingwa kubva kuEtobicoke Chikoro cheUnyanzvi chiri muToronto Canada. Pasina kukanganwa, mutambi wedu weCanada akapinda zvikoro zvina zvakasiyana zvepamusoro muhupenyu hwake hwese.
Reeves akadzingwa kubva kuEtobicoke Chikoro cheUnyanzvi.
Hupenyu mushure mekudzingwa Chikoro:
Mushure mekudzingwa kwake, mudiki Reeves haana kukanda mapfumo padzidzo dzake. Asi, akanyoresa kunodzidza kuDe La Salle College kwaakatora ice hockey zvakanyanya.
Kunyangwe Keanu Reeves akange asingadi zvakanyanya kuvadzidzi vake, akazvitutumadza pakushanda seye hockey muchengeti wepachikoro chake.
Aive nekufarira zvakanyanya muHockey Hockeys kupfuura chero chimwe chiitiko chedzidzo.
Pamakore gumi nemashanu, akazopedzisira afunga kuita basa rekuita. Kare kumashure, aisaziva kuti sarudzo yake yaizovhura musuwo wezve hupenyu-hunoshanduka chiitiko muHupenyu Hwake Hupenyu.
Keanu Reeves akaramba achienda kuchikoro sezvo aishanda nababa vake vekare baba mukugadzira bhaisikopo.
Nekuti Reeves aisakwanisa kuona ramangwana rakavimbika mune zvedzidzo, akafunga kusiya chikoro chepamusoro. Nyeredzi Yemberi akabva atanga kutarisa pakuzvivakira zita muindasitiri yemamuvhi.
Nerubatsiro rwaAaron (aimbova baba vake vekurera), Reeves akatamira kuLos Angeles muna 1984. Ikoko aishanda semunyori wechirongwa chevechidiki. Kuenda Kwakakura.
Ona kusachena kwaakaita akatarisa kumashure mumazuva aakatanga kuita.
Mugore rimwe chetero, Reeves akatangawo mumitambo yeterevhizheni Hangin 'Mukati sekucherechedzwa pamusoro.
Keanu Reeves Biography - Mugwagwa Kune Mukurumbira Nhau:
Reaves acting Career akawira munzvimbo yake paakatanga kutamba akasiyana masitayera mumazhinji madrama madhiraama, kushambadzira, uye TV.
Nekudaro, mafirimu aakamboita akanangidzirwa kune vechidiki. Nekudaro, mutambi weavice aifanira kushanda zvakatonyanya kuti awane kuwanda muindasitiri yemamuvhi.
Sezvo nguva yakafamba, saizvozvowo Reeves akaramba achivandudza hunyanzvi hwake hwekuita. Akatoita mumafirimu mazhinji kutenderera ma1980s kuti akwanise kufambisira mberi basa rake.
Neraki, basa rakaoma rakabhadharwa sezvo Canadian Actor akazonyora budiriro pamwe nevakuru mabasa muma1990.
Keanu Reeves Bio - Kubudirira Nhau:
Nekuratidzira kuita kwepfungwa-kuridza mufirimu - havukavu, zvishoma nezvishoma akawana mukurumbira munyika yeVaraidzo.
Unoziva here?… Reeves akapihwa $ mamirioni gumi nerimwe kuti akande mufirimu Speed ​​2: Cruise Kudzora. Zvinotyisa, akaramba chikumbiro.
Pasina nguva iri kure, Keanu Reeves akazviitira zita muHollywood. Kungofanana nevamwe vake vekuCanada vanozivikanwa (Dwayne Johnson uye Jim Carrey), Reeves aigara achiremekedzwa semuvhivhi mufirimu nevateveri vake.
Kukupa iwe kubwinya kwezita rake, akazozivikanwa nekuita mune sainzi fikisheni firimu, The Matrix.
Iye chaiye akaisa epic performance muMatrix. Ndosaka munhu wese achida Neo!
Nekukurumidza kumberi kunguva yekuburitsa iyi Biography, Keanu Reeves akagamuchira mibairo mizhinji kubva paakasimukira Mukurumbira.
Rangarira yakaipa movie action yakanzi John Wick? Zvakanaka, Keanu Reeves uyo airatidzika semutambi mukuru wemuvhi akaita hupfumi kubva mairi. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
John Wick, iyo epic bhaisikopo iyo yakaenda hutachiona uye yakaita kuti Reeves awedzere kufarirwa.
Keanu Reeves Anoda Hupenyu - Wife, Vasikana, uye Vana:
Kutanga uye pamberi pezvese, zvinonakidza kwazvo kuti mutambi weCanada anga ari muhukama nevakadzi vanopfuura makumi maviri.
Nhoroondo yaKeanu Reeves kufambidzana nhoroondo inoenda kure kumashure kunge ma80. Kare kumashure uye zvishoma nezvishoma, akataura naMelissa Reigel, Jill Schoelen (1985 - 1988), Sofia Coppola (1991 - 1992), Amanda de Cadenet (1995 - 2001), naAlexandra Grant (2019) kutaura vashoma.
Pakati pehukama hwake hwakawanda, mumwe chete wevasikana vake - Jennifer Syme - ndiye akamira kunze. Hukama hwaReeves nemudiwa wake, Jennifer, hwaive padanho rakasiyana chose.
Muna Zvita 1999, Jennifer akaberekera Reeves mwana. Mwana, uyo shiri yerudo inonzi Ava Archer Syme-Reeves aive akazvarwa akafa (kufa kana kurasikirwa kwemwana asati kana panguva yekusununguka).
Zvinosuruvarisa, nhamo yakarova Reeves apo Jennifer akafa mutsaona yemotokari mwedzi mishoma mushure mekunge vaviri ava vaparadzana.
Tarisa wake wekunonoka-musikana uye amai kumwanasikana wavo anononoka, Jennifer Syme.
Keanu Reeves Hupenyu Hwemhuri:
Chokwadi ndechekuti, mutambi anozivikanwa akawana chiitiko chinoshamisa mumba make. Izvo zvinoenda pasina kupokana kuti Reeves Mhuri yakachinja zvakanyanya basa rake sezvatinazvo nhasi. Heano mamwe mashoma ruzivo nezve yega yega nhengo yemessage yake.
Nezve Keanu Reeves Amai:
Amai vaReaves, Patricia Taylor, ndiye ega airiritira mhuri yake. Pakutanga, Patricia akashanda nesimba kuti awane raramo muBeirut.
Ikoko akasangana nababa Reeves chaivo ndokumuroora. Hupenyu hwake hwakakurumidza kuva husiku husiku achigara nemurume wake, Samuel. Nekudaro, iye akatora danho rakashinga pakurambana makore matatu mushure mekuzvarwa kwaReeves.
Sangana naamai vaKeanu Reeves vakanaka, Patricia Taylor.
Mushure mekurambana nemurume wake wekutanga, amai vaReeves vakapedzisira varoora Paul Aaron muna 1970. Zvisinei, imba yavo yakangogara kwegore vaviri vacho vasati varambana.
Mushure mekurambana kwake kwakawanda, amai vaReeves vakasangana naJack Bond, mugadziri wevhudzi. Akawira murudo naye uye akanzwa kunge aigona kuvaka hukama hunogara naJack.
Nekudaro, shiri mbiri dzerudo dzakaroora. Nehurombo, muchato hauna kugara kwenguva yakareba sekufunga kwaive kwaita vaviri. Nekudaro ivo zvakare vakarambana makore mashoma mushure mekuroora kwavo.
Nezve Keanu Reeves Baba:
Nyeredzi yedu inozivikanwa yemamuvhi angadai akatora rimwe basa nzira dai baba vake vasina kuvasiya. Nehurombo, baba vake, Samuel Nowlin Reeves Jr., vakasiya Reeves nevamwe vese vemhuri yake aine 3.
Mushure mekugara munzvimbo dzakasiyana kwenguva yakareba, Reeves akasangana nababa vake makore gumi gare gare kuKauai. Kubva ipapo, mutambi wedu weCanada haana kuisa maziso ake kuna baba vake. Nehurombo, Samuel Nowlin Reeves akafananidzirwa pazasi akatambura nekupindwa muropa nezvinodhaka.
Baba vaReeves, Samuel Nowlin, akakundikana kuzadzisa ake ehubaba muhupenyu hweedu weCanada celeb.
Nezve Keanu Reeves Vanun'una:
Muchato wemubereki waKeanu Reeves wakabereka kuberekwa kwake uye munin'ina wake, Emma Reeves.
Kunyangwe zvakadaro, hukama hwakazotevera hwababa naamai vaReeves mushure mekurambana kwavo kwakamutsa kuzvarwa kwevanin'ina-hanzvadzi vake.
Nekudaro, Reeves ane vaviri-nhanho-hanzvadzi, anonzi Karina Miller (kuburikidza naamai vake) naKim Reeves (kuburikidza nababa vake).
Nezve Keanu Reeves Relatives:
Kunyangwe amai vaReeves vakatamba chinzvimbo chakakosha kwazvo chekuva mubereki muhupenyu hwake, hapana ruzivo rwunozivikanwa nezvevabereki vake.
Nekudaro, chimiro chesekuru nasekuru vake vanoramba chiri chakavanzika kune fan wake. Kune rimwe divi, sekuru vababa vaReeves naambuya vake vaive Samuel Nowlin Reeves naMomilani Sarah.
Keanu Reeves Hupenyu hweMunhu:
Zvinowanzoomera kuwana mukurumbira weCanada uyo ari pasi pasi saKeanu Reeves. Ichokwadi ndechekuti, mafeni mazhinji anoona kuzvininipisa kwaReeves kuve kwechokwadi zvisingaite.
Nyeredzi yedu inozivikanwa yemuvhi ine rudo rusingadzivisike rwemidhudhudhu. Hazvishamise kuti akabatanidzwa mutsaona shoma dzemudhudhudhu idzo dzakakuvadza muviri wake.
Chimwe chezvinhu zvinozivikanwa zvinozivikanwa zvaKeanu Reeves kutasva bhiza. Munguva yebasa rake rekuita, Reeves akadzidzawo hunyanzvi hwekurwa.
Unoziva here?… Nyeredzi yedu yeCanada yakadzidza nezve mazana maviri ehondo yekurwa kuti itambe zvakanaka muThe Matrix Reloaded muna 200.
Chimiro chechiso chake hachinzwisisike pese paanokwira bhiza.
Keanu Reeves Mararamiro:
Hupenyu Hwoumbozha hweCanada yedu ine mukurumbira hwakagutsa tarisiro yevateveri vake. Panguva yekunyora iyi Hupenyu Hupenyu, Keanu Reeves ane fungidziro yeNet Worth ye $ 360 mamirioni. Kungokuzivisa iwe, mibairo yaReeves inotangira zvakanyanya kubva mukuita kwake uye kunyora kwake.
Keanu Reeves 'Dzimba, Motokari, uye Midhudhudhu:
Kusiyana nevamwe vakawanda vanozivikanwa, Reeves anoshandisa yakawanda yemihoro yake pamabhasikoro. Kuda kwake midhudhudhu hakugone kunyatsonzwisiswa.
Reeves ane yake Harley-Davidson Dyna Wide Glide, yeWest Coast Choppers Bike, uye 1973 Norton 850 commando bhasikoro.
Pamusoro pemudhudhudhu wake, wedu iconic John Wick mutambi ane imba inodhura iri muLos Angeles. Imba yake inotenderera munzvimbo inosvika zviuru mazana mashanu nemazana matanhatu emakumbo. Iye zvakare ane mota zhinji dzekunze, dzinosanganisira Ferrari Fan uye Volvo 5,600.
Mhedziso muKeanu Reeves's Lifestyle.
Keanu Reeves Untold Chokwadi:
Kuputira yedu Keanu Reeves Bio, heano mashoma ezvechokwadi nezvake izvo zvingakubatsire iwe kuti unzwisise zvemunhu wake.
Chokwadi # 1: Keanu Reeves Zvakaipa Zvakaitika:
Imwe yenjodzi dzisingakanganwike dzakawira mutambi wedu weCanada kufa kweshamwari yake yepamwoyo, Rwizi Phoenix. Zvinosuruvarisa, Reeves akarasa shamwari yake kumaoko anotonhora erufu nekuda kwekuwedzeredza zvinodhaka muna 1993.
Chokwadi # 2: Keanu Reeves Run-ins Nemutemo:
Pakati pehunhu hwake hwakareruka, Reeves ave neRun-ins nemutemo. Akambosungwa nekuda kwekutyaira akadhakwa neDoro. Zvisinei, akakurumidza kubvuma mhosva yake mushure mekubatwa. Reeves akaputsawo mitemo yemigwagwa uye akamhanya mwenje mutsvuku muna 2006.
Chokwadi # 3: Keanu Reeves Chitendero:
Pese panobvunzwa Keanu Reeves nezvechitendero chake, mutambi weCanada anogara achipa mhinduro isina kujeka. Muchokwadi, hapana anogona kunyatso tsanangura chitendero chake chechokwadi. Zvisinei, chinhu chimwe chiri pachena; chokwadi chekuti anotenda kuti Mwari ariko uye naDhiyabhorosi. Mushure mekuongorora zvakazara kufarira kwake uye maonero echitendero, pane mukana wekuti Reeves ari pachezvake kune chiBuddha.
Chokwadi # 4: Keanu Reeves Tattoos:
Nekufamba kwenguva, isu takatarisa Reeves akaratidzira akati wandei mabasa akamutendera kuti aise maattoo pamuviri wake.
Kuonekwa kwaReeves munaJohn Wick naConstantine kwakaratidza mashoma maatato akaomeswa muviri wake wese. Zvisinei, mutambi weCanada haana tattoo pamuviri wake muchokwadi. Reeves haasi fan of inking.
Keanu Reeves anoratidza ake mazhinji maTattoo mufirimu - John Wick.
Pazasi peiyo wiki ruzivo-hwaro hwaKeanu Reeves Bio. Tafura yacho ichakubatsira iwe kuwana ruzivo nezvake muchidimbu uye zvine mutsindo. Tsvaga pazasi.
Zita rizere: Keanu Charles Reeves
Nick Zita: Iyo Rusvingo Iyo Imwe
Zuva rekuzvarwa: 2nd September September 1964
Nzvimbo yekuzvarirwa: Beirut, Rebhanoni
Amai: Patricia Taylor
Vanun'una: Emma Reeves (hanzvadzi)
Karina Miller naKim Reeves (nhanho-hanzvadzi)
Musikana / Mucheche amai: Jennifer Syme
Vana: Ava Archer Syme-Reeves
Net Worth: $ Miriyoni 360
Hobbies: kutasva bhiza nekufambisa
kukwirira: 1.86 m - mumamita
6 '1 "- mumakumbo
Kunyangwe nhamo ingawira chero munhu uye kunyange hupenyu hungave husingayerere zvinoenderana nemafungu ezvinotarisirwa, isu tinofanira kushanda nesimba. Kwaive kushanda nesimba uye kusarudza kwakabatsira Reeves kuwana nzira yebasa yaakasarudza muHupenyu Hwake Hupenyu.
Ngatiregei kugara tichichema nekuchema pamusoro pezvatinodzokera kana nemamiriro ezvinhu asina kunaka. Asi, ngatishandei zvine hungwaru nemafungiro akanaka kuti tizvibudise kubva mune chero nyonganiso inovhara hupenyu hwedu.
Ndatenda nekuverenga kwedu vhezheni yaKeanu Reeves Biography. Inzwa wakasununguka kugovera zvaunofunga nezve iyo Bio iri mune yekutsikisa bhokisi pazasi.
Zvakare, isu tinofara kukuzivisai kuti zvinyorwa zvedu uye nyaya ndezvechokwadi. Nekudaro, kana iwe ukawana chero chinhu chinoita senge chiri mushe muKeanu Reeves Bio, taura nesu nemutsa nezvazvo.